ရင်နင့်ကြွေ(9) — Steemit
kyi (56)in #myanmar •3years ago (edited)
ရင်နင့်ကြွေ (1)အားဖတ်ရူ့ပါရန် link✅
ရင့်နင့်ကြွေ (2)အားဖတ်ရူ့ပါရန် link✅
ရင်နင့်ကြွေ(3)အား ဖတ်ရူပါရန် Link✅
ရင်နင့်ကြွေ(4)အား ဖတ်ရူပါရန် Link✅
ရင်နင့်ကြွေ(5)အား ဖတ်ရူပါရန် Link✅
ရင်နင့်ကြွေ(6)အား ဖတ်ရူပါရန် Link✅
ရင်နင့်ကြွေ(7)အား ဖတ်ရူပါရန် Link✅
ရင်နင့်ကြွေ(8)အား ဖတ်ရူပါရန် Link✅
ညဘက် ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်သဖြင့် ထိုင်းမှိုင်းနေသော စိတ်ဖြင့်သာ နှိုးထလာရလေသည်။ သူငယ်ချင်း နာရေး သွားပို့ပြီး ဘုန်းကြီး တရားနာပြီး ပြန်လာခဲ့သည်။ ဘုန်းကြီး တရားသံကြောင့် စိတ် အနဲငယ် အေးချမ်း လာသည်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ခင်ပွန်းသည် ဦးမောင်ဦးမှ ဖုန်းကို အကြိမ်များစွာ ခေါ်ထားသည်ကို တွေ့ရသဖြင့် ပြန်ခေါ်မိသည်။ ဖုန်း အကြိမ်ကြိမ်ခေါ်သော်လဲ မကိုင်ချေ။
ဒေါ်မိုမိုးတစ်ယောက် ယောက်ယက်ခတ် လျှက် ထိုင်ရမလို ထရမလို ဖြစ်နေလေသည်။
အသံကြားသဖြင့် ကြည့်လိုက်တော့ အကိုဖြစ်သူ၏ သမီး ဖြစ်နေသည်။
"အေး ဘာလဲ မာမာ”
"အေး အဲ့ဒါ ပြန်ခေါ်နေတာ မကိုင်လို့အေ”
"ဟို....ဟို... မနေ့ညနေက ကျောက်ဖြူတိုင်ဆည်မှာ ပိုင်ရှင်မဲ့ မိန်းကလေး အလောင်း ပေါ်လို့တဲ့ အကျီအနီနက် ဆည်ဘောင်နားက ယင်းမာဖိနပ်အဖြူလေး တွေ့တယ်တဲ့ ကျောက်ဖြူတိုင်ကနေ အလုပ်ဆင်းတဲ့ သူတွေက ပြောပြလို့ ဦးလေးမောင် စိတ်ပူလို့ မမိုးမိုး ဆီ ဖုန်းဆက်တာ မမိုးမိုး မကိုင်လို့တဲ့ သူပြန်လာနေပြီတဲ့ အဲ့ဒါကြောင့် တော်ဖုန်းပြန်ခေါ်နေတော့ မသိတာနေမှာ..”
ဒေါ်မိုးမိုး တစ်ယောက် သူမ စကားကြားပြီး မိုက်ကနဲ ဖြစ်ရလေပြီ..။
သမီးဖြစ်သူကိုနောက်ဆုံး ဘာအင်္ကျီနှင့် တွေ့တာပါလိမ့် အမြန် ပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ ဟုတ်တယ် အင်္ကျီအနီရောင်လေးပဲ..။ သမီးဖိနပ်တွေထဲ အပြေး အခန်းထဲ ဝင်ကြည့်တော့ သမီးစီးနေကြ ယင်းမာဖိနပ် အဖြူလေး မတွေ့..။
"သွားပါပြီ ငါ့သမီး ငါ့သမီး ”..ဟု သွေးရူးသွေးတန်းရွတ်ရင်း ရွာလူကြီး အိမ်သို့ဖိနပ်မပါပဲ အပြေးရောက်သွားရလေပြီ။
"ဦးလေးမြ ဦးလေးမြ ကျုပ်သမီး ပျောက်နေတာ ၂ရက် ရှိပြီ ဦးလေး အဲ့ဒါ ခု ကျောက်ဖြူတိုင်ဆည်မှာ မိနိးကလေးအလောင်း တွေ့တယ်ဆိုတော့ သွားကြည့်မလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဦးလေး လုပ်ပါအုံးတော်”
"ဟာ မိုးမိုးရာ အစောထဲ က လာပြောရမှာကို ပေါ့တာဟာ မနေ့ညနေထဲက ရဲစခန်းက ငါတို့ရွာတွေဆီ ဖုန်းဆက် လာတယ် ရွာမှာ လူပျောက်ရှိမရှိကို နင်လာမပြောထားတော့ ငါလဲ မရှိပါဘူး ပြောလိုက်တာ နောက်မို့ဆို့ မနေ့ညနေထဲက ဟုတ်မဟုတ် ကြည့်လို့ရတယ်ဟ”
"ကျုပ်လဲ ဒီနေ့ လာပြောမလို့ပါတော် သမီး ကို သူ့ရည်းစားနဲ့ လိုက်သွားတယ်ထင်လို့ ဆက်သွယ်လာမလား စောင့်နေတာ ဦးလေးမြ ခု ကျုပ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ..”
"အေး အေး ခန ငါ ရဲစခန်း ဖုန်းဆက်လိုက်မယ် ...”
"ဟဲလို.. ဟုတ်ကဲ့ ရဲစခန်းကလားခင်ဗျာ့ ကျွန်တော် ကျော်ရွာက ရွာလူကြီး ပါ ရွာမှာမိန်းကလေး တစ်ယောက် ပျောက်နေတယ်လို့ ခုမှ လာ အကြောင်းကြားလို့ ကျွန်တော်တို့ ပိုင်ရှင်မဲ့ အလောင်းကို လာကြည့်ပါ့မယ် ခင်ဗျာ...”...
"ကဲ သွားရအောင် မိုးမိုး ခေါ်ချေ နင့်ယောက်ျားရောငါတို့ သွားကြရအောင်..ငါ ကျောက်လမ်းက စောင့်မယ်”
ဒေါ်မိုးမိုး အိမ်သို့ အပြေးပြန်ရောက်လာတော့ အိမ်၌ အမျိုး တချို့ နှင့် ဦးမောင်ဦး ပါ ပြန်ရောက်နေသည်ကို တွေ့ရလေသည်။
အကျိုးအကြောင်း ပြောပြပြီး အမျိုး တသိုက်နှင့် ရွာမှ ကူညီရေး အသင်းကား ခေါ်ပြီး ဆားလင်းကြီးမြို့ ရဲစခန်း သို့ ထွက်လာခဲ့လေသည်။
ဦးမောင်ဦးတစ်ယောက် ငူငူကြီးထိုင်လျှက် ဒေါ်မိုးမိုးမှ ငိုလျှက် ဘေးမှ တူမများက ဖြောင်းဖြလျက် ....
"မမိုးမိုး ရယ် ကျုပ်တို့ ညီမ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှာပါ တော် အာ့လောက် မတွေးပါနဲ့ ခုကြည့် သိရမှာပေါ့ကို..”
ရဲစခန်းရောက်တော့ ဆေးရုံ ရေခဲတိုက်ကို သွားလိုက်ပါ ဟု ဆိုသဖြင့် ရေခဲတိုက်ဆီသို့ ရောက်လာရလေသည်။
ရောက်လာတော့လည်း တံခါးဖွင့်မည်သူ မလာသေးသဖြင့် အတန်ကြာ စောင့်နေရလေသည်။
ကိုမောင်ဦး ကျုပ်တို့ သမီးဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတော်...ပြောရင်း....ငိုရင်း.....
(ဖြစ်ရပ်မှန် အဖြစ်အပျက်အား ဇတ်လမ်းသဖွယ် ရေးတတ်သလောက် ရေးဖွဲ့ ထားပါသည်။)
#novel #sad #life #kryptonia
3 years ago in #myanmar by kyi (56)
​အော်​...မိဘဆို​တော့လဲ သားသမီးကိုချစ်​တဲ့​ဇောနဲ့ အပူမီးဝိုင်း​တော့တာ​ပေါ့
Allah has created all beautiful men & women, and ugly ones also.If not created ugly then we had couldn't justify, praise beautiful ones. But we shouldn't ignore them.
all island, hill, mountain, forest,ocean everything is made by Allah, seeing it we become fascinate, but very few we ever think who made it? Why made? He is Allah, we have to back again to Him. He is free from all partnership. thank you very much for suchagood post.
ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းလေးက တော်တော်လေးတော့ စုံလာပါပြီ။ဝမ်းနည်းစရာလေးပါ။နောက်အပိုင်းလေးတွေလည်း စိတ်ဝင်စားလှပါ၍ စောင့်မျှော်အားပေးနေပါ့မယ်။
tunnaingwin (62)3years ago
မုံရွာကနေ နေပြည်တော်လာပြီးဆေးရုံတက်တဲ့လူတစ်ယောက်လဲ အဲသလိုပဲ ဆိုင်ကယ်တိုက်မိလို့ဆိုလားဆေးရုံရောက်နေတာ သူ့အိမ်ကမသိဘူး၊သူကလည်းသတိမေ့နေတာ နောက်ဆုံး ဆရာတော်ဆီဗေဒင်သွားမေးတော့မှ ဘာမှမေးမနေနဲ့နော့ ဆေးရုံသာလိုက်ကြဆိုလို့လိုက်မှ သူတို့အဖေတွေ့ကြရဆိုပဲ
ဟုတ် ဦးမင်း ထူးခြားတယ်နော်😔
Congratulations @kyi ! You receiveda0.66% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia for your task of 10 SUP Today.
asterkame (61)3years ago
suhlaing (58)3years ago
winko (52)3years ago
ဆည်ထဲခုန်ချပြီး သတ်သေသွားတာလားဗျာ တစ်ကယ်များလား
suhtetaung (49)3years ago
မဟုတ်ပါစေနဲ့ မဟုတ်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းမိပေမယ့်လည်း....
Congratulations @kyi! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
နိလုပ်မှ ကျောက်ဖြူတိုင်ဆည် သာယာမှုလေးပျက်ပါပြီဗျာ၊ ရေးထားသမီးရေ ပုံနှပ်စာလုံးအဖြစ်ဖေါ်ပြရအောင်။
အာ့က တကယ်ဖြစ်ရပ်မှန် ဆရာ
ng-chitsonelay (42)3years ago